Meaning Chiporofita Zvinoreva ZveTsuro - Zvinoreva Zvemubhaibheri
viga nhamba yako paunofona
nhamba 47 inorevei
ipad haizoshanduke yakanamatira pane apple logo
Chiporofita zvinoreva tsuro
Tsuro imhuka ine hunhu nesimba zvine chimwe chinhu chinopokana. Zvichienderana netsika iri kutaurwa, vanhu vakatarisa iyi mbeva munzira dzakasiyana. Mungano dzevaGiriki, semuenzaniso, Tsuro yaive yakabatana namwarikadzi Hecate. Muma hieroglyphs eEjipitori, yaive nechokuita nepfungwa yekuti ‘kuvapo’ kana kuti ‘kuvepo.’ VaHeberu vekare vaiona mhuka iyi seisina kuchena nekuda kwekuchiva kwayo (Dhuteronomi 14: 7). Kune maIndia eAlgonquin, iyo Hare Huru ndiyo dhongi remhuka.
MuChina, Tsuro, seimwe ye gumi nembiri nyeredzi nyeredzi zviratidzo, inoonekwa senge nyeredzi inofara. Vanhu vakazvarwa pasi pechiratidzo ichi vaizowana masimba emwedzi uye vachipfuura sevanonzwisisa uye nehunyanzvi. Ivo vanozivikanwa nechishuvo, finesse, uye kunaka. Sekureva kwengano yeChina, tsuro inogara pamwedzi.
Kurova zvivakwa zveTsuro kunosanganisira kugona kwayo kubereka uye nekukurumidza. Mhuka iyi inofamba zvakanyanya muchiuno nekusvetuka. Zvinoitwa nevanhu vane totem iyi zvinowanzo tevedzera iwo iwo maitiro. Kudzidza izvi zvinhu zveTsuro zvinogona kuve zvinodzidzisa zvikuru.
Kune chikamu chikuru, tsuro dzinogara munzvimbo dzine matenhe nehuswa hurefu. Ivo vanoshanda vese masikati neusiku, asi unovaona kazhinji mambakwedza nemadekwani. Iyi nguva yezuva netsika inosanganisirwa nehushe umambo. Nechikonzero ichocho, Tsuro anowanzo kutorwa semhuka inogona kutitungamira muumambo hwenyaya isu tisingazvizive. Zvichida muenzaniso unonyanya kuzivikanwa weizvi unowanikwa muna Lewis Carrol 'Alice muWonderland', umo Alice anotevera tsuro chena mugomba uye nekudaro anoguma munyika yakanaka izere nezviitiko.
Pamwe chete nemakonzo, tsuro ndiyo mhuka dzinodyiwa dzinonyanya kuvhimwa. Zvisikwa zvinoripa izvo nekuvapa kubereka kwakakwirira. Tsuro dzinogona kubereka kaviri kana kashanu pagore, nemarara ega ega achiverenga pakati pevatatu kusvika vatanhatu vadiki. Saka hazvishamise kuti Tsuro chiratidzo chekare chebonde uye kubereka.
Amai vanongopa mukomana chikafu mangwanani nemanheru. Anogara kure nedendere kwemazuva ese uye anozvipa chikafu. Nenzira iyi, haakweve kutarisa mukomana. Nehurombo, vanhu vakati wandei vanosangana nemacheche evana vari vega vanofunga kuti amai vavo vakavasiya vovaendesa kune imwe nzvimbo.
Mushure memwedzi, mazuva makumi maviri nemasere, vechidiki, vari, vakazvimiririra. Vanogona kugara mudendere, asi kana zvichidikanwa, vanogona kuzvibata vega. Nemarara matsva, amai vanoburitsa yapfuura kubva mudendere. Mumazuva makumi maviri nemasere aya, tinoona zvakare kubatana pakati paTsuro nemwedzi. Kana tsuro ikaonekwa se totem, mazuva makumi maviri nemasere ekuratidzira kutenderera kazhinji anotanga.
Tsuro nembira zvinouya mumarudzi ese uye mhando, musango uye sezvipfuyo. Nyatsoongorora hunhu uye hunhu hwemhuka yauinayo se totem uye edza kushandisa iyo yawakawana ruzivo kuhupenyu hwako. Chengetedza zvakanyanya kusvetuka uye kusvetuka kubva paRabbit yako. Mafambiro muhupenyu hwako wega anowanzo kuratidza iwo iwo maitiro uye asina kutsiga nhanho-nhanho hunhu. Kusvetuka uye kusvetuka kunowanzo tevera kutenderera kwemwedzi mumwe (mazuva makumi maviri nemasere).
Kunyange hazvo vamwe vachiwana tsuro dzichitya, vane nzira dzakanaka dzekuzvidzivirira. Ivo vane totem iyi vanofanirwa kushandisa iwo mamwe maitiro. Tsuro dzinowanzoita uto rekuhwanda nekuzorora. Kuti vaite izvi, vanochera ndiro isina kudzika muvhu kana huswa, iyo yakavhurika kumberi nekumashure, kuitira kuti vatize kana zvichidikanwa. Tsuro vanhu vanofanirwawo kunge vakagadzirira zvese zvinoitika.
Kuonekwa kwetsuro kunogona kureva kuti unofanirwa kuronga zviri nani kana kutarisa zvauri kutoita kuti usazosangana nezvinoshamisa. Zvakare, tsuro inyanzvi mukudzivisa kuonekwa. Vanogona kugwamba uye kugara zvakanyarara. Vanoziva kuti zvikara zvakawanda zvinogona kuona kufamba kure. Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge kuita mune imwe nzira yemakwikwi - kubasa kana nemitambo - zvakakosha kuti iwe uchengete kufamba kwako kwakanyatso kuvharwa.
Tsuro dzinogona zvakare kutendeuka ipapo ipapo uye kutiza nemheni inomhanya. Kuchinja kubva pamhedziso yekumira kusvika pakumhanya kwazvo, saka, hunyanzvi hwekuti munhu wese ane totem iyi ave nehunyanzvi. Iwe uchave unobudirira mune izvo zvaunoita uye unogona kutora mukana wemikana iyo iwe yaunogona kungopihwa kwauri chete kwenguva pfupi. Kuchinja kubva pamhedziso yekumira kusvika pakumhanya kwazvo, saka, hunyanzvi hwekuti munhu wese ane totem iyi ave nehunyanzvi.
Iwe uchave unobudirira mune izvo zvaunoita uye unogona kutora mukana wemikana iyo iwe yaunogona kungopihwa kwauri chete kwenguva pfupi. Kuchinja kubva pamhedziso yekumira kusvika pakumhanya kwazvo, saka, hunyanzvi hwekuti munhu wese ane totem iyi ave nehunyanzvi. Iwe uchave unobudirira mune izvo zvaunoita uye unogona kutora mukana wemikana iyo iwe yaunogona kungopihwa kwauri chete kwenguva pfupi.
Tsuro vanhu vanodya nyama. Neiyi totem, iwe unofanirwa, saka, nyatso tarisa pane kwako kudya. Panyaya yehutano hwako uye kupora, iwe unogona kubatsirwa zvakanyanya kubva kune yekudyara yemuriwo, kunyangwe kana chete kwenguva pfupi.
Tsuro inogona kukudzidzisa iwe kuti uone zviratidzo zvakakukomberedza. Iye anokubatsira iwe kutenderera mukati meyekutenderera kwemwedzi uye nekuona mafambiro ehupenyu hwako kuitira kuti iwe ugove unotonyanya kubereka muhupenyu hwako.
CHIHEBHERU GORE 5777 CHIPROFITA ​​ZVINOREVA
Zviroto Zvechiporofita Nezve Shumba